Caruur ay Al-Shabaab "u diyaarisay is-miidaamin" oo lasoo badbaadiyey
Ciidamadda ayaa sheegay in howlgalkan uusan dhankooda kasoo gaarin wax khasaaro ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ugu yaraan 16 Al-Shabaab ayaa lagu dilay, 40 caruur ahna waa laga soo badbaadiyey howlgal ka dhacay Koonfur Galbeed Soomaaliya, sidda ay Sabtidii shaaca ka dhigeen mas'uuliyiin ammaan.
Dhaqdhaqaaqaas liddiga ku ah xoogaga gacansaarka la leh Al-Qaacida ayaa laga fuliyey meel ku dhow degaanka dhowaan la xoreeyay ee Bariire kaasoo qiyaastii 62 KM u jira magaala madaxda dalka Muqdisho.
Bariire oo caan ku ah beeraha ayaa ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo argagixisada ay joogitaan culus ku leedahay.
Axmed Xasan Salaad, taliye ka tirsan ciidamada howlgalka fliyey, ayaa sheegay in dhankooda uusan howlgalka kasoo gaarin wax khasaaro ah.
"Intii howlgalku socda oo ka dhacay tuulada Nuuney oo duleedka ka ah magaalada Bariire, milatariga waxaa u suurtagashay in ay soo badbaadiyaan 40 caruur oo kasoo kala jeeda qaybo kamida dalka," ayuu yiri.
Sidda ay warisay Idaacada Codka Ciidamadda, maleeyshiyaadka soo qafaashay ciidamadan waxay qorsheynayeen in ay u adeegsadaan is-miidaaminta.
Marka laga soo tago sheegashada ciidamada Soomaaliya, ma jiraan illo wareedyo madax-banaan oo xaqiijinaya dhamaan sheegashooyinkooda.
Gobolka Shabeellaha Hoose waxaa muddooyinkii u dambeeyay ka socday dhaqdhaqaaqyo hubeysan oo hadafkoodu yahay in laga hortago lana burburiyo fariisimo cusub oo Al-Shabaab sameysato mar-xalada kala guurka.
Ciidamadda Dowladda Soomaaliya oo weerar jid-gal ah lagu qaadey
Soomaliya 09.01.2020. 14:19
Saraakiil amni ayaa xaqiijiyey in uu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo gaarey.
Madaxii sirdoonka Al-Shabaab ee Shabeellaha Hoose oo la qabtey
Soomaliya 22.03.2020. 06:59
Mas'uuliyiin lala xiriiriyey qarax dhimasho sababay oo lasii daayey
War Saxaafaded 19.03.2020. 10:40
Ciidamadda oo guul ka sheegtay dagaal ay la galeen Al-Shabaab
Soomaliya 15.10.2020. 22:20
Ciidamada oo maciin-biday badda xili ay Al-Shabaab kordhisay qaraxyada
Soomaliya 21.10.2019. 15:12
Al-Shabaab oo weerartay Saldhig AMISOM iyo Marka oo la duqeeyay
Soomaliya 01.01.2020. 10:14
Guulo laga sheegtay weeraro lagu ekeeyay ciidamadda Soomaaliya
Soomaliya 24.03.2020. 07:00
Hooyo iyo gabadheeda oo ku dhintay qarax ka dhacay Soomaaliya
Soomaliya 09.04.2020. 11:50